HomeWarka Xiisaha LehWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Martial, McGinn, Zapata, Traore, Barisic, Melo, Milinkovic-Savic
January 18, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Weeraryahanka France Anthony Martial, 26, ayaa doonaya inuu ka tago Manchester United laakiin ma doonayo inuu amaah ugu baxo koox kale oo Ingiriis ah. Barcelona , Sevilla iyo Juventus ayaa ah seddex doorasho oo uu u dhaqaaqi karo Janaayo. (Fabrizio Romano)
Manchester United ayaa bartilmaameedsanaysa khadka dhexe ee Aston Villa iyo Scotland John McGinn, oo 27 jir ah, suuqa xaggaagan. (Telegraph)
Newcastle United ayaa soo bandhigtay qiimo ka badan 30 milyan oo euros (£25.1m) si ay u hesho weeraryahanka Atalanta iyo Colombia Duvan Zapata, 30. (Daily Record).
Garabka Wolves Adama Traore, oo 25 jir ah, ayaa laga yaabaa inuu helo Ogolaansho si uu uga tago kooxda 24-ka saac ee soo socda, iyadoo xiddiga heerka caalami ee dalka Spain lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo Tottenham iyo kooxdii hore ee Barcelona . (DailyStar)
David Beckham ayaa u dhaqaaqi kara saxiix weyn Inter Miami ka dib bixitaankii khadka dhexe ee Faransiiska Blaise Matuidi, iyadoo weeraryahanka Atletico Madrid iyo Uruguay Luis Suarez, oo 34 jir ah, uu ka mid yahay magacyada la saadaalinayo inay imaanayaan. (Thesun)
Daafaca bidix ee Rangers Borna Barisic, 29, ayaa xaqiijiyay inay koox u dhaqaaqday horaantii suuqa kala iibsiga, iyadoo ay jiraan xanta xiddiga reer Croatia lala xiriirinayo Watford iyo Aston Villa . (Sky Sports)
Wadahadaladii Arsenal ay kula jirtay Juventus ee ku saabsanaa heshiis amaah ah oo ay ku doonaysay xiddiga khadka dhexe ee Arthur Melo ayaa hakad galay sababtoo ah kooxda Serie A ayaan wali helin badalka 25 jirka reer Brazil. (Tuttomercatoweb)
Chelsea ayaa fursad xor ah ku heli karta saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Monaco iyo xulka France Aurelien Tchouameni, 21 jir, iyadoo Manchester United ay dareenkeeda u jeedisay khadka dhexe ee Mali Amadou Haidara, 23, iyo Borussia Monchengladbach 25 jirka reer Switzerland Denis Zakariye. (football.london)
Xidiga xorta ah ee Diego Costa, oo lala xiriirinayay Arsenal , ayaa isha ku haya inuu u dhaqaaqo kooxda reer Brazil ee Corinthians , halkaasoo 33 jirka reer Spain uu kula xiriirinayo saaxiibkiisii ​​​​hore ee Chelsea Willian. (Evening Standard)
Manchester United ayaa sidoo kale hogaamineysa Juventus iyo Inter Milan tartanka loogu jiro saxiixa 26 jirka qadka dhexe ee Serbia Sergej Milinkovic-Savic oo Lazio ka tirsan , laakiin kooxda Serie A ayaa dalban doonta ugu yaraan 80m euros (£ 66.8m). (Il Messaggero)
Weeraryahanka Belgium Eden Hazard ayaa doonaya inuu ka tago Real Madrid , laakiin ma xiisaynayo inuu ku biiro Newcastle , oo dalab 41.3 milyan ginni ah ka gudbisay 31 jirkaan . (El Nacional)
Barcelona ayaa 24 jirka garabka uga ciyaara xulka qaranka France ee Ousmane Dembele siisay 48 saacadood si uu go’aan uga gaadho heshiiska la dhimay ee ay kooxdu soo bandhigtay iyada oo uu heshiiskiisa haatan dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Mundo Deportivo)
Paris St-Germain ayaa Chelsea u soo bandhigtay fursad ay kula soo saxiixan karto daafaca reer France ee Layvin Kurzawa, laakiin tababaraha Blues Thomas Tuchel ayaan jeclayn 29 jirkaan inkasta oo uu dhaawac halis ah ka soo gaaray jilibka daafaca bidix ee England Ben Chilwell oo 25 jir ah. (Goal)
Goolhayaha France Hugo Lloris, oo 35 jir ah, ayaa ku dhow inuu qandaraaska u kordhiyo Tottenham . (football.london)
Goolhayaha Manchester City Arijanet Muric oo 23 jir ah, kaasoo amaah ugu maqan kooxda Turkiga ee Adana Demirspor , ayaa qarka u saaran inuu ku biiro Galatasaray dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Koha Net,)